Christina Ricci na Juliette Lewis aghọọ ndị anụ na -eri anụ iji lanarị 'Yellowjackets' - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Christina Ricci na Juliette Lewis aghọọ ndị anụ na -eri anụ iji lanarị 'Yellowjackets'
Christina Ricci na Juliette Lewis aghọọ ndị anụ na -eri anụ iji lanarị 'Yellowjackets'
Kedu ihe ị ga -eme ka ị dị ndụ?
by Trey Hilburn III August 6, 2021 51,322 echiche
Oge ngosi nwere ihe ngosi na -ada ụda nke ukwuu n'ụzọ akpọrọ, Uhie edo edo. Ihe nkiri a na -egosi kpakpando dị egwu Christina Ricci na Juliette Lewis. Nkata a gbadoro anya na ndị otu egwuregwu bọọlụ nke ga -adịrị ndụ mgbe ihe mberede ụgbọelu mere ihe ọ bụla ọ ga -ewe yana ụdị ịga nke Onye na -efe efe na -eme. Ọ na -emecha lekwasị anya n'ihe ndị lanarịrịnụ ga -ebi na izo ihe nzuzo ka ha wee bie ndụ dị mma. Ihe si na ya pụta bụ usoro na-ehulata ụdị nke na-ahazi oke egwu nke mmụọ na ọbịbịa akụkọ afọ ... mana na iri anụ mmadụ.
Nkọwapụta maka Showtime's Uhie edo edo na-aga dị ka nke a:
Otu egwuregwu ụmụ agbọghọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị nwere oke egwu nke na -aghọ (un) ndị lanarịrị ihe mberede ụgbọ elu miri emi n'ọzara Ontario. Usoro a ga -edepụta usoro ọmụmụ ha site na ndị otu dị mgbagwoju anya mana na -eme nke ọma na -alụ ọgụ, agbụrụ na -eri anụ, ebe ha na -enyochakwa ndụ ha nwara ịlaghachi azụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 25 ka e mesịrị, na -egosi na ihe gara aga agabeghị n'ezie na ihe malitere na ọzara tere aka.
Usoro a na -ada ka ọmarịcha na mkpirisi mkpirisi anyị na -enweta nke abụọ na -eche ihu na -enye anyị obi ụtọ na Ricci ga -akpọ onye ọjọọ na Lewis bụ onye na -eme ihe nkiri nke ga -ebi na nzuzu nzuzu nke a manyere ha ịlanarị.
Usoro a nwekwara kpakpando Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell, Sammi Hanratty, Sophie Thatcher, Sophie Nelisse, na Jasmin Savoy Brown. Ọ bụ Karyn Kusama na -eduzi usoro ọkwọ ụgbọ elu ahụ (Inkù ahụ, Onye Mbibi)
Kedu ihe ị chere gbasara trailer maka Uhie edo edo? Mee ka anyi mara na ngalaba a.